Offshore Banking: Nei vanhuwo zvavo vachigadzira mabhizimisi ezvinyorwa
Offshore Banking uye Asset Protection
Zvakanaka kufunga nezvepasi senzvimbo ine mutsa iwe paungasambosangana nematambudziko emutemo. Nekudaro, kana iwe uchidzidza manhamba, iwe uchaona kuti pane mukana wakanaka wekuti pane imwe nguva iwe unozosimuka nematare edzimhosva pamaoko ako. Zvinopfuura chimwe. Sekureva kwegweta Jay Mitten, munhu akaenzana muUS anosangana nematare manomwe panguva yeupenyu hwake. Nayo, kunouya gweta risinganyengeri rinowedzera mafuta uye kupisa murazvo wematambudziko ako.
Izvi zvinonyanya kuitika kune vanhu vanogara vane mabhizimusi avo. Saka nekudaro, kutongwa kusingatarisirwi, pamwe nekuedza kubvuta hupfumi hwako, kunogona kuiswa pasuo rako chero nguva. Chinhu chimwe ndechechokwadi kune vanhu vazhinji. Izvo hazvina basa kuti mhosva inouya kuburikidza nebhizinesi kana yega nyaya. Iyo inogona kuve kurambana, kana kunyange nyaya yemutero. Chero iwe paunokwira mudare, iwe unoda kuti zvinhu zvako, kana zvimwe zvimwe zvacho, zvirambe zvakachengetedzwa. Saka nekudaro, vazhinji vanotendeukira kuna offshore banking inosanganisirwa chishandiso chakakodzera chepamutemo chekuchengetedza midziyo yavo kubva kune dzakadai njodzi muhupenyu.
Nei Offshore Banking?
Saka, nei vanhu vachivhura mabhengi emahombekombe? IUnited States chete ine 4.2% yehuwandu hwepasirese. Nekudaro, ine 80% ye magweta epasi uye 96% yematare epasi. Saka, Asset kudzivirira ndiro zita remutambo wevaAmerican sezvo iri iro rinotyisidzira zvakanyanya pamari yavo. Vanhu vazhinji vanofambisa mari yavo kubva kunze kwenyika vakatarisana nepfungwa yekuchengetedza zvinhu. Uyezve, vanonzwa zvichidikanwa kuchengetedza ivo vanogona kuwana zvingangozovhundutsai munguva yemberi - vakweretesi, vatambudzi, uye kurambana. Mazhinji kurwiswa kwemutemo kunobva mukati meUS.
Ivo zvakare vanoshandisa kushandisa offshore account kuti vadzose kubhadhara kwavo mutero. Iyi inonyanya kuwana pamari inowanikwa ichibva kune dzimwe nyika. IUS inopa vanhu vayo pamari yepasi rose. Nekudaro, makambani akaita seApple neGoogle anochengetedza mari pamhenderekedzo uye anonakidzwa zvikuru nekuchengetedza mutero. Kusiyana neUS, dzimwe nyika hadzibhadhara vagari vadzo pamari yepasi rose. Wese munhu haagone kutora mukana weizvi, zvisinei, saka tanga wabvunzwa mutero wezvemitero. Zvekare, usangopamhidzira iwo kuronga nzira "inofanira kuva iyi" nzira yemutero mupfungwa dzako. Tora marezinesi ekubhadharisa zano.
Kune vanhu vari kutora chikamu mukudzivirirwa kwefuma, vanowanzoisa zvinhu izvi mune imwe yediki, yakazvimirira yezvitsuwa-nyika. Matunhu aya anowana musika wevanofarira vanobva kune dzimwe nyika vakagadzirira kumabhenesi ekunze. Dzakawanda dzenyika idzi dzine mutemo unobvumidza pfuma kubva pakutongwa. Uyezve, mamwe matunhu anogona kupa chikamu chakanaka chekuvanzika kune avo vanoisa mari muakaunti idzi. Naizvozvo, mutemo unosungira munhu kutevera mitemo yenyika yake.
Offshore Asset Kudzivirira
Dziviriro yeasfa dzimwe nguva inotora akawanda mafomu. Kunyange paine sarudzo dzemahombekombe dzakawanda, mota dziri kumhiri kwemakungwa dzinowanzo shanda zvakanyanya kune chinangwa chekudzivirira zvinhu. Nekudaro, mabhiza emakungwa anopa simba zvakanyanya mukudzivirira kwezvinhu. Uye yeuka, kana uchinzwa uine mhosva zvachose nezvekutora nzira iyi, usadaro. Mushure mezvose, ndeyako zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo-izvo iwe zvakashanda nesimba kuti uwane.
Ziva kuti pamusimboti wayo, kuchengetedzwa kwemidziyo haisi chero chinhu chakadarika njodzi. Zvakafanana nekutenga inishuwarenzi; uye kazhinji kazhinji zvakanyanya kudzivirira uye kudhura-zvinobudirira. Kana iwe uri kuita bhizinesi nhasi, saka iwe unonzwisisa kuti zvakaoma sei kuti uwane purofiti. Saka, kuvaka nhare inochengetedza michero yebasa rako uye kukusevha mari inogona kunge iri njere yekuchenjera.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingoenda pamusoro. Saka nekudaro, iwe ungade kufunga nezvechimwe chikamu chebhizimusi rega rega. Iyi nzira inoisa bhizinesi rega rega mune yavo yega cubby gomba. Nenzira iyoyo, mhosva inopokana nebhizinesi rimwe chete haisi kuzokunda humambo hwako hwese. Uye nekuwedzera, iwe unowedzera simba rezita rako rekudzivirira asset paunoita kudaro mhiri kwemakungwa. Saka ndedzipi sarudzo dzako dzekuchengetedzwa kwepfuma seseti?
Nevis uye Asset Kudzivirira
Nevis yaive imwe yemahombekombe ekutanga kumahombekombe munguva dzazvino kupa kuchengetedzwa kwemidziyo uye zvakavanzika mitemo. Iyi ndeimwe nzira yekuyedza nekuyera kunze njodzi yekushanda mabhizinesi mazhinji. Makambani muNevis anokwanisawo kudzivirira kurwisa kusingabvumike kunogona kubva kune magweta asina kuchenjera. Uchishandisa kambani yekuumba sevhisi, senge ino, unogona kumisikidza bhizinesi risiri pamhenderekedzo. Kuzvisanganisa pamwe nekuvimbika kwemahombekombe uye / kana nheyo yemahombekombe kubva kune dzakasiyana siyana nyika pasi rese kunogona kubatsira kuregedza zvirambidzo.
Nyanzvi dzinowanzo kurudzira Nevis bhizinesi risiri pamhenderekedzo nekuti mitemo yavo inoda kuvanzika uye kuchengetedzwa kwemidziyo. Iyo Nevis LLC, sekunyora uku, inopa inonyanya kushanda kuchengetedza kwemidziyo kuchengetedza chero kambani yekune dzimwe nyika.
Heano zvimwe zvikonzero nei Nevis LLC (kunyanya kana ichibatanidzwa neNevis trust) chinhu chakanakisa chengetedzo yeaseti:
Mumwe anofanirwa kuisa chisungo che $ 100,000 chisati chasvitsa mhosva yekutevera mutongo unopesana nehukama hwemunhu unofarira muNevis LLC.
Iyo yekunyengedza kutamisa Chirevo chekugumira ingori makore maviri chete. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukaisa midziyo muNevis LLC, makore maviri mushure, Nevis matare haazonzwa nyaya yacho.
Pamusoro peizvi, mukweretesi anofanira kuratidza kupfuura kupokana kunonzwisisika muridzi weNevis LLC akatsigira iyo LLC kuti achengetedze zvinhu kubva kune iye mukweretesi.
Chengetedzo yefail inoita kuti mukweretesi arege kutora iyo kambani kana zvinhu zvainazvo zvinopihwa kune imwe-nhengo kuwedzera kune dzakawanda nhengo nhengo maScript.
Kunyangwe kana munhu akawana mari yekuchaja, inopera mumakore matatu uye mukweretesi haakwanisi kuvandudza iyo.
Kunyangwe yakasimba kupfuura iyo Nevis LLC ndeye Nevis asset dziviriro. Kuiisa mune yakasimba mazwi, iyo Nevis kuvimba ndechimwe chezvishandiso zvakanyanya pazvinhu zvekuchengetedza zvinhu pasi. Kana vedare reUS roti "dzosera mari" trustee yekumhiri ichiti, "ndine hurombo, hauna simba pano." Kana tamisa Nevis kuvimba tinoisa Nevis LLC mukati. Nenzira iyoyo, mutengi ndiye maneja weiyo LLC kana nguva dzave dzakanaka. Zvino kana arohwa neyemutemo kurwiswa, iye akavimbika (mutemo wedu kambani muNevis) anogona kupindamo otomutsa nhare yekudzivirira yefa.
Belize uye Asset Protection
Belize inopa kugadzirwa kwekambani kumahombekombe uye kubhangi kwemhiri. Mushure meNevis, ndeimwe sarudzo iri nani yekuchengetedza asset uye kuvanzika. "Belize ndiyo imwe yenyika dzandaizoenda kunoviga mari yangu uye kurarama kana ndaizodii," akadaro Dennis Lormel, aimbova mukuru weFBI's Financial Crimes Section. "Chokwadi ndechekuti ini ndichatidzivirirwa ikoko, uye hurumende (yeUS) ingangodaro isingakwanise kundidzikisira kana kupinda mumabhengi angu ebhengi." Naizvozvo, zvinongokurudzirwa kuti ushandise kubhengi rekune dzimwe nyika. yeimwe yezvakawanda zviri pamutemo, zvinangwa zvepamutemo.
Mushure meNevis, iwe Belize LDC kusanganiswa ne Belize trust ndiwo maviri ezvekushandisa zvakasimba masimba ekuchengetedza zvinhu pasi rese. Ichi chikonzero nei.
Mari yemipiro (mari inopihwa kumisikidza LDC) inobvisirwa mari yekubvisa kubva kuunyengeri kubva kumukweretesi.
Chiverengero cheganhuriro pane kubiridzira kuburitsa kweBelize LDC ipfupi zvikuru. Rinongova gore rimwe chete kubva kwayakasimbiswa uye yakawana mari kana makore maviri chete kubva panguva yakaendeswa chinhu icho mariri.
Kuvimba kweBelize kune zvakangofanana kubatsirwa uye kune simba zvakanyanya kupfuura iyo LDC. Kazhinji isu tinosimudza kuvimba kweBelie neBelize LDC mukati. Sezvakaita neNevis LLC, mutengi ndiye maneja weBelize LDC kusvikira "chinhu chakaipa" chikaitika. Zvino kana mukweretesi akarwisa, Belize truste inopinda nekuchengetedza pfuma. Matare ako emunharaunda haana kutonga pamusoro peBelize matirastii. Nekudaro, ivo havakwanise kumanikidza trustee kuti iteerere.
Chiremera cheganhuriro pane kuendesa kwehunyengeri kune Belize trust ipfupi sezvazvingaite. Kune kurambana kunoenderera kana nhaka ichiti mutemo weganho zero. Ndokunge, kana munhu achinge achinge achinjisa zvinhu zvakadaro muchivimbo, kuvimba kunodzivirira.
Kusungirira Zvinhu Zako
Kuti uchengete zviwanikwa zvako kubva kumatare anomirira zvisina mhosva, iwe unofanirwa kuongorora njodzi yako uye kukosha uye rudzi rwezvinhu zvako. Kurongwa kwemari yekumhiri kwemakungwa kunopa huwandu hwakakura hweasarudzo dzisiri kuwanikwa mudzimba. Kutanga, usati watanga kuronga kwepamberi kwekuchengetedza zvinhu zvako, izvi ndizvo zvekuita. Kutanga, iwe unofanirwa kuita kuti iwe uine yakakura, yakasimba asiti dziviriro nheyo.
Chaizvoizvo, iwe unofanirwa kuisa iyo midziyo mumidziyo yakakodzera yepamutemo. Uyezve, iwe unofanirwa kusarudza masimba akakodzera kuitira kuti uwane kuchengetedzwa kwaunoda. Iwe unogona kusiyanisa zvinhu zvako mukati mezvishandiso zviri pamutemo mumabhangi ari munzvimbo dzisingatarise kutongwa kwekunze. Izvo zvakananga zvakananga uye zvinokurumidza kutanga. Mukuwedzera, nekuita izvi iwe unogona kuchengetedza pfuma yako uye zita rako paunenge uchiita bhizinesi yepasi rose. Rega tizive kuti izvi zvido zvako uye tichakuratidza kuti ungaita sei.
The Cook Islands Trust or Nevis kuvimba yakasanganiswa pamwe ne offshore LLC mukati mekuvimbika kwakasanganiswa kwakanaka. Sezvambotaurwa pamusoro, apo matare eUnited States anoda kuti udzorere mari yacho, kambani yedu yemutemo yekumhiri kwemakungwa inogona kuramba kutevedzera.
Shadow Makambani Okuchengetedza Kwemari
Zvinofadza kuti The Tribune-Review yakataura kuti inenge makumi mashanu kubva muzana yezvokutengeserana kwenyika yose inoita nzira yayo kuburikidza nenzvimbo dzekuteresa. Imwe nzira yekuteresi yekushambadzira kwebhangi yekutenga iri kuwana bhadha yebhangi yega yega muzita rekambani. Sezvo zvakadaro, inodzivirira mari kubva chero munhu wose waunoda kuchengetedza mari kubva. Izvi zvinogona kusanganisira vatengesi, masayendisiti, vaimbova vakaroorana, kana mamwe emari.
"Kuva nekambani isingazivikanwe kunobatsira chaizvo kuita kwakawanda… zviitiko, uye kuwana kambani isingazivikanwe kuri nyore," akadaro Jason Sharman, mudzidzisi wekubhanga rekune dzimwe nyika kuGriffith University kuAustralia. Kugadzira kambani kunogona kukurumidza uye nyore. Muchokwadi, izvi ndezvedu zvehunyanzvi uye panguva yemazuva ekushanda, kambani yedu inoumba makambani ekunze zuva rega rega. Kuwana iyo yekubhangi rekunze kambani kune yako kambani yemakungwa kunogona kutora nguva yakati rebei uye kushanda nesimba. Saka tsvaga rubatsiro kubva kune mumwe munhu ane ruzivo muindastiri iyi. Zvekare, ichi ndicho chinhu chatinoitawo zuva nezuva - kubatsira vatengi kuvhura offshore account. Paunoita iwe zvakare, iwe uchaona zvichikosha kwazvo kana zvasvika pakuzvidzivirira kubva pakurwisa kwemari.
Mamwe mabhengi emhiri kwemhiri kwemakungwa anongoda zviuru zvishoma zvemadhora emari yavo yekuvhura. Vamwe, kunyanya iyo Swiss bank account, inoda yakafanira huwandu hwemari yekubhadhara. Swiss banking inowanzoda kubva ku $ 250,000 kusvika kumadhora 1 mamirioni kuvhura account.
Urongwa hwekuchengetedzwa kwepfuma kwemahara hwave chinhu chekupokana mumakore mashoma apfuura. Urongwa hwakanakisa hwekudzivirira kweasiti ndewe kuita chivimbo chisingadzoreki chine simba rekugadzika. Izvi zvinodaro nekuti mutemo haufunge nezvekuvimba nhumbi sepfuma yeSettlor. Ramba uchifunga, kana iwe uchitenga iyo kuvimba, hausi kungotenga chivimbo. Mukuwedzera, iwe uri kutenga ruzivo rwemunhu kunyora kuvimba.
Kuti akudzivirire, nyanzvi inofanirwa kuinyora zvakanaka zvichienderana nechero chirevo uye chaicho chiitiko chemutemo. Saka, izvi hazvisi kuzviita iwe pachako. Tora rubatsiro. Mushure mezvose, iri mari yako. Kune akawanda mafomu ekuvimba. Mhando yega yega ine zvinangwa zvakasiyana kana zvinangwa.
Kubata ruvimbiko rwemhiri kwemakungwa ingangove yako sarudzo yakanaka yekuchengetedza zvinhu zvako. Muchokwadi, isu tawana iyo yekumahombekombe kuvimba neyakasimba chombo chiripo.
Vanhu vanoshandisa zvisingaiti pamhenderekedzo yezvakawanda kupfuura kungodzivirira munhu akangwara waakweretesa. Semuenzaniso, ivo vanozviitira kune mumwe munhu anotarisa kudzosa hupfumi hwavo mune yevashandi mubairo. Tinogona zvakare kuvashandisa kuchengetedza midziyo yako kubva kumatare asina kuchena anomirira chikwereti chemotokari, moto unoita zvakanyanya kukuvadza kupfuura maishuwarenzi ako anovhara, nezvimwewo.
Sezvineiwo nedzimwe nzira dzekuchengetedza zvinhu, zvakanakisa kuisa chivimbo kuti chishande nyaya isati yamira. Nenzira iyoyo, inokwanisa kukuchengetedza zvakanyanya. Ehe, iwe unogona kuishandisa senhare yepashure-yekutonga. Asi kuronga-kumberi kwakanaka. Kuvimbika kumahombekombe, nekuda kweichi, kunonyorwa sehusungwa rekuchengetedza chengetedzo. Ndokunge, chinangwa chekupedzisira ndechekuchengetedza yako pfuma.
Nepo mafuro emhiri kwemakungwa anogona kupa mukana wekudzivirira asset, iwe unofanirwa kusvika nenzira iyi nehungwaru. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti mupi wako ane ruzivo uye anonyora kuvimbika nemazvo. Uyezve, sangano rine hukama hwakareba nemutungamiriri rinofanira kutungamira zvakasikwa zvaro.
Kuendesa pfuma kubva muUSA ive chivimbo chepasi rose kuti udzivise wechikwereti iye zvino kubva mukuunganidza inogona kunge iri a kunyengera kutengesa. Nekudaro, ichi chinongova nhau yevagari iyo inowanzo isina mhedzisiro yemhosva. Izwi riri nani pane mutsara uyu "chinhu chinogona kuvhenekwa." Muchokwadi, uyu ndiwo mutsara chaiwo unoshandiswa neunifomu Mutemo. Izvi zvinodaro nekuti izwi unyengeri inowanzotungamira iyo isina kudzidza kune kufunga kwakakomba kupfuura zvazviri.
Offshore Banking Mutero wemitemo
Chaizvoizvo, pane kubatwa kumwe chete neaya marudzi emakambani ekudyara kwemhiri kwemakungwa. Ndiko kuve nechokwadi chekutevera United States "mutero" mitemo. Iyi mitemo inosanganisira kuve nechokwadi chekuita zvinhu se:
Kuzivisa chero ipi zvayo inoshandiswa kuendeswa kune imwe nyika kutendwa ku IRS.
Zvinogoverwa kubva kune yekune rimwe divi chivimbo chinogamuchirwa nemuAmerican zvinogona kubhadhariswa mutero kune iyeye munhu.
Yese mari isina kugoverwa inogona kubvisirwa mutero.
Akaunti yeiyo chero mari inowanikwa mukutendeka kwemahofisi inogona kuve yakagadzirwa mumakore apfuura. Kana zvisina kudaro, kugovera kunogona kukonzera iyo America kubhadhara mari yemitero pamakore iwayo. Izvi zvakangoita sekunge mari yaiwanikwa mumakore apfuura. Kana iyo mari isina kutaurwa kare, iwe ungakumbirwa kubhadharisa zvirango uye mubereko. Pfungwa iripo ndeyekuti mari yekuchitsva pamhenderekedzo haina mutero. Iwe haubhadhare zvakanyanya kana zvishoma pamitero kana iwe uchibata mari yako ichienda kumahombekombe kana mhiri kwemahombekombe.
Iyo IRS inokukumbira (kana CPA yako) kuti utore fomu iri nyore yemutero. Fomu racho rinojekesa kukosha kwezvinhu zviri mukati mekuvimbika. Mukuwedzera, iwe uchazopa mazita ivo chaivo vanowana chekuvimbika. Kana iwe ukatadza kunyora ichi chirevo iwe unogona kuwana mubhadharo, we pakati pezvimwe zvinhu, $ 10,000 yekukurumidza kubhadhara. Ukatadza kuisa mushumo zvachose, zvinogona kuwedzera simba. Saka, ita shuwa kuti accountant yako izere uye isa faira mafomu ari nyore panguva.
Mune mamwe mazwi, iyo IRS haina hanya kana iwe uine account yekune dzimwe nyika. Kuva neaccount yekumahombekombe hakusimudzi "mireza tsvuku," seizvo vamwe vanofunga zvisizvo. Ivo vane hanya chete kuti iwe utaure yako mari. Kunyangwe iwe uchiwana purofiti pamhenderekedzo kana pamhenderekedzo, taura chaunowana. Nekudaro, haisi yekumahombekombe kana kumahombekombe iyo inokoshesa ku IRS. Iko kuri kutaurira iwe zvaunowana zvakakosha, zvisinei kuti izvo zviwanikwa zvinowanikwa kupi.
Offshore Corporate uye Kuvimba Mutero Matipi
Pane amwe matipi emutero akakosha aunofanirwa kuziva seanopihwa, anotamisa, kana kuendesa kune imwe nyika. Izvo zvinofambisa zvinhu mukutenda kwekunze pamwe nevanozobatsirwa nevekunze vekunze vanofanirwa kuziva ruzivo rwunotevera. Saizvozvo, kana iwe uri kubata yako yekune dzimwe nyika sekambani yepasi rose, pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva. Kunyanya, tora iyo yakakodzera chiito kana iwe ukawira mune chero ezvidimbu zvikamu pasi:
Iwe uri mugovani mune 10% kana anopfuura esangano remahombekombe. Uyezve, inopfuura hafu yezvitoro zvesangano ine varidzi vashanu kana vashoma veAmerica.
Vashanu kana vashoma vekuAmerican vane chekuita nekambani yako yemahombekombe stock. Uye zvakare, 60% uye pamusoro pemari inowanikwa nekambani iyi kubva mukudyara.
Une share shares kubata kwe offshore company kubata 50% kana kudarika epfuma sepfuma yekudyara. Mukuwedzera, iwe uri kugadzira 75% uye pamusoro pemari yakawandisa nemari yakafanana yekudyara.
Pane chero zviri pamusoro apa ichokwadi here? Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kuve neshuwa yekuzivisa mari yacho pane yako yemutero yekudzoka. Nekudaro, ita shuwa kuti ubvunze neCPA uyo ane ruzivo nezvikwata zvekunze. Mazhinji emaCPA ane ruzivo mune iyi nhandare anobva kumaguta akakura ane huwandu hwevanhu vakapfuma. Yako nharaunda inoshamwaridzana CPA kubva kuBudtussle, Kentucky angangove ari pamusoro wake musoro. Iwe unogona achiri kushandisa yako yemunharaunda mukomana kana gal kune ako ekutanga mafirita. Asi for offshore mafirimu, tora munhu anoziva ndima.
Zviripachena, iwe unofanirwa kumisikidza garandi rekuchengetedza asset yekudzivirira nemaziso ako akasvinuka. Iyo inopa nzira yekuisa yako pfuma kupfuura iko kwevanokweretesa. Nekudaro, nekuronga kwakangwara, uye kuziva kweye wega mutero mafirita, iwe unogona kuita zvinhu nenzira. Uyezve, unogona kuvanza zvinhu zvako kubva kune magweta asina mhosva. Ingova nechokwadi chekuti, kune nzira dzinoshanda uye dzine simba dzekuzvidzivirira kubva kunjodzi dzemutemo. Kune vamwe vanhu vazhinji vanogara vakadaro mazuva ese.
To chitsauko 7>